> Resource> Video> Flash ka Video Ntụgharị: tọghata Flash ka Video mfe
Wondershare Flash ka Video Ntụgharị - Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) bụ ihe pụrụ iche akakabarede ngwá ọrụ na-ike tọghata Flash ka video na-enwe ọkacha mmasị gị Flash faịlụ na iPod, Zune, PSP na ndị ọzọ na mobile ngwaọrụ na Wondershare Flash ka Video Ntụgharị. Ọ na-enye gị ọrụ dịgasị iche iche nke ekwe ka ị ogbe tọghatara, tinye watermark, na akuku video na na.
N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otú iji nke a kensinammuo Flash ka Video Ntụgharị iji tọghata Flash ndị ọzọ video / audio formats nzọụkwụ site nzọụkwụ
1 Ibu Ibu Flash FLV faịlụ
Free download Flash ka Video Ntụgharị, wụnye na ẹkedori ya. Pịa "tọghata" tab> "Tinye Files" menu mbubata gị chọrọ Flash FLV faịlụ site na kọmputa gị ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ ha site na kọmputa gị na-ngwa a.
2 Họrọ nke ọ bụla video ma ọ bụ ọdịyo usoro ị chọrọ
See format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ na-emeghe a ngwa si mmepụta format ndepụta, ebe fọrọ nke nta niile na-ewu ewu video na ọdịyo formats na-gụnyere. Dị nnọọ na-aga "usoro"> "Video" ma ọ bụ "usoro"> "Audio" Atiya ịhọrọ usoro ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata Flash FLV faịlụ dị nnọọ ka playback na ụfọdụ ngwaọrụ, ị nwekwara ike họrọ ihe kwesịrị ekwesị mmepụta format dị nnọọ dị ka ngwaọrụ gị aha.
3 Dezie Flash FLV faịlụ (Nhọrọ)
Nke a ngwa na-enye nza nke edezi ọrụ dị ka cropping, ọnwụ, trimming, merging, na-agbakwunye watermark na ndepụta okwu wdg Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie gị Flash faịlụ n'ihu akakabarede, dị nnọọ na-aga "Dezie" na onye ọ bụla video mmanya ịhọrọ kwekọrọ ekwekọ atụmatụ.
4 Malite iji tọghata Flash ka video formats
Na ala-nri akuku nke a Flash ka video Ntụgharị, pịa "tọghata" button na-amalite Flash ka video akakabarede. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike tọghata Flash usoro ọ bụla ọzọ video ma ọ bụ ọdịyo format maka ojiji. Pịa "Open nchekwa" bọtịnụ na interface ịchọta mmepụta faịlụ. Ị ga-ahụ na converted faịlụ ndị na usoro ị chọrọ.
Key Akụkụ nke Wondershare Flash ka Video Ntụgharị
Tọghata Flash FLV ọ bụla na-ewu ewu video formats
Wondershare Flash ka Video Ntụgharị bụ ihe pụrụ iche omume nke atọghata Flash FLV ka fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video formats dị ka AVI, WMV, MP4, AVI, 3GP, MP3.
Tọghata multiple lekwasịrị Flash faịlụ n'ime otu na oge.
Agagharị gị ntụgharị Cache na-akpaghị aka ịchọta ndị Flash faịlụ site na ibe weebụ ị gara.
Flash ka Video Ntụgharị Ike flash edezi ọrụ
Wondershare Flash ka Video Ntụgharị enye gị ohere tinye ahaziri watermark na mmepụta faịlụ na-ewetara ma ọ bụ na-ekwu na gị ikike, ma ọ bụ agba gị video na a pụrụ iche n'ụzọ.
Mfe ka akuku video ike video dị iche iche na ihuenyo size izute gị dijitalụ Player 'mkpa.
The kemeghi mmepụta video mmetụta na-enyere gị iji hazie eku ọnụego, bit ọnụego, mkpebi na ọbụna akụkụ ruru maka ihe ezigbo playback mmetụta.
Webvideo Author: tọghata video ka nkwanye Flash video
Otú ịgbanwe Face na Video